Okpokoro Igwe Na-acha Igwe Mmiri nke Na-adịghị Anya Na-acha Mmiri Abụọ-Agba Ọkụ China Emeputa
Nkọwa:Na-egosi na mmiri adịghị,Okpokoro okpukpu abụọ,Ọkụ n'èzí
Na-egosi na mmiri adịghị,Okpokoro okpukpu abụọ,Ọkụ n'èzí
Home > Ngwaahịa > Ìhè anyanwụ > Mbara Igwe Ochie > Okpokoro Igwe Na-acha Igwe Mmiri nke Na-adịghị Anya Na-acha Mmiri Abụọ-Agba Ọkụ
Igwe ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ, okpukpu abụọ na-agbanwe ìhè, na- akọwapụta mmiri ahụ , nke a kwadebere maka n'èzí, ihe na-adịghị mmiri na nke na-egbuke egbuke, nchịkwa nwere ọgụgụ isi, ìhè ojii ụbọchị, ìhè nke ụtụtụ. N'èzí ọkụ ọkụ
Kwadoro na ntanetị nke ikuku, nwere ike ijikọta ọtụtụ oriọna ọkụ, nhazi nkewa mgbatị na mita 30 n'ime ime ikuku, igodo Ntọala nchekwa nchekwa ntọala, melite nsụgharị ntanetịpụ anya, anya dịpụrụ anya, nhụpụ ntanetị nke mgbidi. Jiri ọkwa ọkwa A panel panel, ike na inogide, ndụ ndụ nwere ike iru ihe karịrị afọ 10, nnukwu elekere polycrystalline panel, ike elu arụmọrụ, nchekwa nwere ọgụgụ isi, otu bọtịnụ ntọala, oge nchekwa ọkụ nwere ọgụgụ isi. Rịba ama njikwa akara tinyere oge nchịkwa tinyere igwe ntanetị.
Ụda ọkụ abụọ . Otu igodo mgbagwoju na agba okpukpu abụọ, okpukpu abụọ na-acha anụ anụ na-arụ ọrụ, ikuku ntanetịị na-acha ọkụ ọkụ. IP66 ọkwa mmiri na-enweghị mmiri, nke a kwadebere maka n'èzí, mmiri na-ekpuchi mmiri, nke na-enwu ájá na nke àmụmà. Oké égbè eluigwe na-enwu na mbara igwe na-enweghị mmetụta ojiji.
Ngwá mmiri dị elu nke mmiri na-adịghị mma, arụmọrụ na-adịghị ike mmiri, njikọ njikọ njikọ njikọ, ọ dịghị mfe ịkụ, wepụsị mmiri mmiri ozuzo. Akwa ike polycrystalline silicon solar panels, nguzo agha, nnukwu mpaghara, okpomọkụ ngwa ngwa absorption, ngwa ngwa ngwa, ogologo oge ọrụ. Batrị ahụ dị elu na-adịgide ruo awa 12, na ogologo ndụ ọrụ na ike mgbe niile n'oge mmiri ozuzo. A na-enyocha ya kpamkpam na enweghị onwe ya. Ọ dị mma na a pụrụ ịdabere na ya.
Ngwaahịa : Ìhè anyanwụ > Mbara Igwe Ochie
Na-egosi na mmiri adịghị
Ogige mmiri na-adịghị ekpuchi
Ube Na-ekpuchi Ihe Na-adịghị Ewu
Elu elu mmiri ọkụ
Ogwe Mmiri nke Na-adịghị Awụpụ Mmiri
Na-echekwa ihe ndị ọzọ